၀၂:၀၅၊ ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၅ ရက်နေ့က မူ
၁၃၀ ဘိုက် ပေါင်းထည့်ခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၅ နှစ်
၀၀:၄၉၊ ၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၄ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
အရေးမကြီး (The file Image:Ernest_Rutherford_cropped.jpg has been removed, as it has been deleted by commons:User:Fastily: ''No source since 28 September 2014: you may re-upload the file, but please cite the file's source''. ''...)
၀၂:၀၅၊ ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၅ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
'''အားနပ်စ် ရူသာဖို့ဒ်''' Ernest Rutherford, 1st Baron Rutherford of Nelson, [[Order of Merit|OM]], [[Privy Council of the United Kingdom|PC]], [[Royal Society|FRS]] (30 August 1871 – 19 October 1937) သည် [[နယူးဇီလန်]] သိပ္ပံပညာရှင် ဖြစ်ပြီး သူ့အလုပ်ဖြစ်သော [[နူကလီးယား ရူပဗေဒ]] နှင့် [[အက်တမ်]] ဖွဲ့စည်းပုံ သီအိုရီ အတွက် ၁၉၀၈ ခုနှစ် ဓာတုဗေဒ ဆိုင်ရာ [[နိုဘယ်ဆုနိုဗယ်ဆု]] ကို ရရှိခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
ရူသာဖို့ဒ် သည် ပထမဆုံးသော နူကလီယား ရူပဗေဒ သုတေသီ ဖြစ်သည်။ သူသည် အယ်လ်ဖာ၊ ဘီတာ နှင့် ဂမ်မာ ဟုခေါ်သော ရေဒီယိုသတ္တိကြွခြင်း အပိုင်း သုံးခု ကို ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ အယ်လ်ဖာအမှုန်များသည် [[ဟီလီယမ်]] နူကလီအိုင် ဖြစ်သည်ကိုလည်း ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ သူ၏ [[ဂိုင်ဂါ−မားစ်ဒမ် စမ်းသပ်မှု]] ကြောင့် ယနေ့သိရှိနေကြသော [[နူကလီးယပ်စ်]] နှင့် [[အီလက်ထရွန်]] တို့ ပေါင်းစပ်ထားသော အက်တမ် ဖွဲ့စည်းပုံ ကို ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ကြခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
* [http://nobelprize.org/chemistry/laureates/1908/rutherford-bio.html Ernest Rutherford] @ nobel.se
* "[http://www.pbs.org/wgbh/aso/databank/entries/bpruth.html Ernest Rutherford 1871 - 1937]". A Science Odyesy, pbs.org.
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/283675" မှ ရယူရန်